पुरानै रोग ब्यूँतिने हो कि ? « News of Nepal
पुरानै रोग ब्यूँतिने हो कि ?
फुट्ने जुट्ने फेरि फुट्ने अनि झनै चोइटाचोइटा हुने गरी फुट्ने पार्टी हो राप्रपा। अब फेरि दुई राप्रपा मिल्ने रे। राप्रपा प्रजातान्त्रिक र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीका नेताले दुई÷चार दिनमा पार्टी एकताको घोषणा गर्दै अंकमाल गर्ने कुरो सुनियो।
अर्थात् फेरि राणा र लोहनीले एउटै लाइनका हुने भएछन्। तर यिनको लक्षण हेर्दा पुरानै रोगले ढिलोछिटो दुःख दिने प्रबल सम्भावना पनि देखियो। पार्टी एकतापछि पनि दुवै अध्यक्ष नै हुने भएसी पुरानो रोग नबल्झिएला भन्न सकिन्न। पार्टी एकताको दुई÷चार महिनापछि दुई नेता दुईतिर फर्किए भने एकता च्यातिएर ए,।।।कता।। पो हुने हो कि ?
पार्टी मिलेकै राम्रो, धरहरा राणा र लोहनीको भलाइ चाहन्छ। तर अब दुई अध्यक्ष हुने पार्टीमा नेता पनि त धेरै हुने होलान्।।रु अब एकीकृत पार्टीका खाँटी कार्यकर्ता चाहिँ कति छन् कुन्नी, यो जिज्ञासा धरहराको मात्रै होइन, आम पाठकवृन्दको पनि हो। जगअनुसारको घर ९पार्टी० बनाउनेतर्फ दुवै दलका नेताले चासो द्या भए पो।
त्यसैले दल मिलेर मात्रै भएन, कार्यकर्ताको मन पनि मिल्नु÷मिलाउनुप¥यो। नेताको झुन्ड र तिनको मन शान्तिका लागि पद मात्रै थप्ने हो भने त अन्य पार्टी र राणा अनि लोहनीमा कुनै भिन्नता नदेखिने भो पाठकवृन्द ⁄